महरा पुत्र एटमको ‘अण्डा राजनीति’ – NewsAgro.com
November 8, 2017 September 8, 2018 newsagro0Comments अण्डा, घोराही, निर्मल महरा ‘एटम’, महरा पुत्र एटमको ‘अण्डा राजनीति’
यो समाचार 776 पटक पढिएको
‘अण्डाले म र मेरो परिवार पालेको छ’
घोराही । धरै मान्छेहरु राजनीतिलाई पेशा ठान्दछन् । स्वभाविक रुपमा पेशा भनेपछि त्यसबाट अवष्य आम्दानीको अपेक्षा गरिन्छ । राजनीति गर्ने मान्छे भने पछि धेरैको मस्तिष्कमा सुकिलो मुकिलो, धारा प्रवाह बोल्न सक्ने र मनग्य पैशा खर्च गर्ने भनेर आउँद छ । हामीले राजनीति गर्ने मान्छेहरु दिनहुँ जसो सार्वजनिक कार्यक्रममा चर्को बहश र छलफल गरिरहेको देख्छौं । तर, उनीहरुले आफ्नो जीवन यापन कसरी गरिरहेका छन् ? भनेर कसैले पनि थप जान्न चाहन्न ।
मुलतः राजनीति समाज सेवा हो । समाज सेवा भने पछि त्यसबाट आम्दानी हुने भन्ने कुरा हुँदैनन् । आखिर कसरी चल्छ त राजनीतिज्ञहरुको जीवन रु उनीहरुले बालबच्चा कसरी पालिरहेका हुन्छन् रु उनीहरले खर्च गर्ने पैशा कहाँबाट आउँछ ? नेपाली समाजमा यो प्रश्न अनुत्तरित रहँदै आएको छ । तर, केही पात्रहरु राजनीतिको साथै उत्पादनका विभिन्न काम गरिरहेको देखिन्छ ।
यी मध्ये एउटा एउटा पात्र हुन् उप प्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराका पुत्र निर्मल महरा ‘एटम’ । उनी नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्य तथा दाङ जिल्ला सचिवालय सदस्य हुन् ।
राष्ट्रिय स्तरका नेताको छोरा एटमले आफ्नो वुवाको पँहुच प्रयोग गरेर धेरै अवसरहरु प्राप्त गर्न सक्थे । उनले ठूलै नियुक्ति खान सक्थे । तर, एटम राजनीतिमा पँहुचको दुरुपयोग गर्नु राम्रो नभएको बताउँछन् । ‘हाम्रो देशका ८० प्रतिशत भन्दाबढी जनता कृषि व्यवसायमा सम्लग्न छन्, उनीहरुको मनोवल उठाउनको लागि भए पनि मैले कृषि व्यवसाय अवलम्वन गरेको हुँ,’ एटमले भने ।
२०५३ सालमा १३ वर्षकै उमेरमा एटमले भूमिगत राजनीति शुरु गरेका थिए । तत्कालिन राज्यले घरमा आएर दुःख दिन थाले पछि एटम पनि कलिलो उमेरमा पढाई छाडेर आफ्नो वुवाले अंगालेको राजनीतिमा होमिन पुगे । ‘म कृषि व्यवसायसँगै राजनीति गर्न चाहन्छु, मेरो दिमागमा अहिले अण्डा र राजनीति सेट भएको छ,’ एटमले भने, ‘अण्डाले म र मेरो परिवार पालेको छ, राजनीति मेरो जीवनसँग जोडिएको छ ।’
← चार गुणाले बढ्यो चिनियाँ धानको उत्पादन
‘नियतवश’ गराइन्छ मल ‘अभाव’ →
यस्तो छ ! कुखुरापालन व्यवसायमा दानाको महत्व